Diffrent ပျံသန်းမှု Sims တူ Aircaft ????????
မေးခွန်း Diffrent ပျံသန်းမှု Sims တူ Aircaft ????????
1 months ago7တစ်နှစ် #1125 by pauand2
တူညီတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသော Sims အတွက်တူညီတဲ့တစ်ဦး / c ကို install လုပ်နည်း
1 months ago7တစ်နှစ် #1126 by bobyor
အဘယ်အရာကိုဆင်းမ်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လေယာဉ်ပျံ။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဆိပ်ကမ်းကိုအများကြီး FSX လေယာဉ်သို့ P3D။ သငျသညျ port ကိုမပေးနိုင် FSX လေယာဉ်သို့ X-Plane သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်။